Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कृषि पेशाबाट करौडौं आम्दानी ! – Emountain TV
बाग्लुङ, २९ पुस । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरु कृषि पेशाबाट विस्थापित भइरहेका बेला बाग्लुङ र कास्कीका केही व्यक्ति भने पशुपालन तर्फ आकर्षित भएका छन । उनीहरु कृषि पेशाबाटै मनग्य आम्दानी गर्न सफल मात्र भएका छैनन, बिदेश जान खोज्नेका लागि पनि स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत बनेका छन् ।
बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीका एक दम्पतीले गाउँमै करोड लगानी गरेर बाख्रापालन गरेका छन् । दुदिलाभाटीका गमबहादुर कुँवर र निरु कुँवरले अहिले बाख्रापालनबाटै मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन् । २०७४ सालदेखि ५-६ वटा बाख्राबाट व्यवसाय शुरु गरेका उनीहरुसंग अहिले एक सयको हाराहारीमा बाख्रा रहेका छन् । ५ बर्ष बैदेशिक रोजगारीमा कोरिया गएका गमबहादुरले स्वदेश फर्किएपछि कोरियामा सिकेका सीपको प्रयोगले बाख्रापालन गर्दै आएका हुन् ।
बाख्रापालनबाट कुँवर दम्पतीले बार्षिक झण्डै १ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने गरेका छन भने गाउँका ६ जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन् । त्यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ अर्मलामा पनि १० जना कृषकले सामुहिक रुपमा व्यवसायिक गाईपालन गर्दै आएका छन् ।
५ वर्ष अगाडी ८ वटा होलस्टन जातका गाईबाट व्यवसाय शुरु गरेका उनीहरुसंग अहिले ७२ वटा गाई छन् । उनीहरुले दैनिक ३ सय लिटर दुधबाट दैनिक २४ हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन । तर पछिल्लो समय दाना र चोकरमा भएको मूल्य बृद्धिका कारण पशुपालनमा समस्या भएको कृषकहरुको गुनासो छ ।
सरकारी परियोजनामा रहेका अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा कृषिमा थप आकर्षण बढ्न नसकेको कृषकको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आफुहरुले वास्तविक किसान सम्म पुगेर बढीभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याएको दावी गरेको छ ।